ezine kuphela eneji Crypto bathobele iimfuno umlawuli South Korea - Blockchain News
EyoMdumba 6, 2018 admin
ezine kuphela eneji Crypto bathobele iimfuno umlawuli South Korea
ekupheleni kuka EyoMqungu, oko kwazeka malunga kokuvalwa ezisemthethweni abasemagunyeni South Korea of engaziwa Intengiselwano cryptocurrencies, leyo wangena ukusebenza ngoJanuwari 30. Ukungqinelana neemfuno zeKomishoni Iinkonzo zeMali of South Korea (FSC), ezintandathu iibhanki zizinikele ukuseka iziseko ngokudala akhawunti ezinamagama real. kunjalo, njengoko kwaba kamva, iibhanki kungeyomfuneko ukuba ukunika iinkonzo ezintsha kubathengi of Exchange Cryptocurrency.
“Ukudalwa akhawunti ezintsha wabelwa ukuya yokutshintsha imali sisigqibo yintliziyo yebhanki,” igosa neebhanki waxelela uhlelo South Korea of ​​Yonhap. uchaza: “Iibhanki ube izibophelelo zomthetho ukuthintela imali ngokungekho semthethweni iyahlolwa kuphela neenkqubo zangaphakathi: isiqinisekiso of iinkonzo ukusuka exchange crypto, uzinzo kwinkqubo, nokukhuselwa ulwazi lomsebenzisi kunye nokuthotyelwa kwemimiselo anti-imali ngokungekho semthethweni.”
Yeebhanki ezintandathu ekhankanywe ngaphambili, ezintathu kuphela – Shinhan Bank, Nonghyup Bank and Industrial Bank of Korea – ukunika akhawunti kubathengi kokutshintshiselana Crypto. Kwaye ezine kuphela 25 ukutshintshiselana exchange yaseMzantsi Korea batshintsha akhawunti gama akhawunti ezinamagama real. Ngaloo ndlela, ezi mfuno zintsha zomthetho zivumelana Bithumb, Upbit, Coinone and Korbit.
Ngokutsho ku Asia Economic, Shinhan Bank, osebenza Bithumb, Kwakhona ndagqiba kwelokuba ecaleni exchange kwinkqubo yokwakha akhawunti ezinamagama real okwethutyana. Ummeli we ibhanki wachaza ukuba eli nyathelo wasiwa ngokunxulumene nesibakala sokuba “exchange lukhangelwe ngamapolisa” kwimeko inkunzi kunyaka ophelileyo.
ukutshintshiselana ezincinane kunye naphakathi ezinika akhawunti corporate, kunokuba abantu virtual, nokulawula ezinye iimfuno. Ngokutsho Yonhap ncwadi, ngelo xesha, ukusetyenziswa kwe-akhawunti corporate uvumelekile ukuba ii-nako ukuxhasa ngokupheleleyo iimbopheleleko zabo ukuthintela imali ngokungekho semthethweni, kwakunye ukuqinisekisa ekuchongweni abathengi. Ukwengeza, baya kujongana “Ukuhlolwa ngokucokisekileyo ezibhankini nabasemagunyeni zemali.” kunjalo, ukutshintshiselana abaninzi abazange bafumane isiqinisekiso akhawunti ezintsha wamxelela Yonhap oonondaba ukuba simise imicimbi ukuba le meko ayizange iguquke. Ngokutsho Korean Blockchain Association, ngayo 787,600 abaxhasi basebenzisa iinkonzo kokutshintshiselana ezifana, asethi zabo ziku- Limbo.
Square ifumana New ...
Ukupapashwa t ...
Post Previous:Coinbase iqala uvavanyo lokugqibela Segwit
Post Next:Asingabo bonke abasebenzi baya kusinda bitcoin ekunciphiseni iindleko
UCanzibe 11, 2018 e 6:41 AM